Isahluko 60. Lokho Ukuguquka Kwesimo Okuyikho Nendlela Eya Ekuguqukeni Kwesimo | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Ukuguquka kwesimo akuyona into elula. Ekukholweni kwethu kuNkulunkulu sikhuluma ngokuguquka kwesimo; lokhu kungumbono omkhulu ngoba labo uNkulunkulu abasindisayo bayiqembu labantu abakhohlakaliswe nguSathane. Akubona abantu abasanda kudalwa nje—abebengenankinga, noma yisiphi isimo esikhohlakele, noma yibuphi ubuthi bukaSathane, noma yisiphi isimo sokuhlubuka kuNkulunkulu. Kunalokho yiqembu labantu abanesimo esikhohlakele sikaSathane nobuthi baso, futhi abafana noSathane. Njengomuntu onomdlavuza nje odinga ukwelashwa ngokuhlinzwa, kuyinqubo eyinkimbinkimbi kakhulu. Ngakho, ungathathi ukuguquka kwesimo njengodaba olulula. Akubona ubuthakathaka bangaphandle noma umkhuba empilweni yomuntu okudinga ukuguqulwa. Ukuguquka kwesimo akuyona into ongayifeza ngoba nje ufuna ukuyifeza. Ngaphakathi kwalokho kunezinqubo eziningi, futhi lezo nqubo zingaphakathi kwamazwi kaNkulunkulu. Ngakho kusuka osukwini uqala ukukholwa kuNkulunkulu, umbono wakho ngokukholwa kuNkulunkulu kufanele uguquke. Ukukholwa kuNkulunkulu akusho ukuthi Yena ufuna ukuthi ube umuntu olungileyo, ube ngumuntu oziphethe kakhe, noma othobela umthetho, noma umuntu nje ongakwazi ukuzicabangela yena noma ukusebenzisa ingqondo yakhe. Abantu babevame ukucabanga ukuthi ukuguquka kwesimo okwakuvela ekukholweni kuNkulunkulu kwakuchaza ukuba ngumuntu ohloniphekile, ukuthi kwakuchaza ukuba nomfanekiso womuntu othile wangaphandle, ukukhuliswa kahle nokuba nesineke, ukubonakala umnene noma unothando, noma ukuzimisela ukusiza abanye nokuphana. Ngamafuphi, kwakusho ukuba wuhlobo lomuntu owayephila emiqondweni nasekucabangeni kwabo. Njengoba kukhona abantu emhlabeni abathi: “Uma ucebile, kufanele unikele kwabampofu noma izinqibi.” Ngakho lezi zinhlobo zemicabango zikhona emiqondweni yabo bonke abantu—bonke banalezi zinhlobo zezinto, futhi kuwuhlobo olulodwa lobuthi. Kubantu abakholwa kuNkulunkulu ngaphambilini, kwakungekho muntu wokuchaza ngokucacile lolu hlobo lodaba, futhi wonke umuntu wayengazijwayele izindaba zokukholwa kuNkulunkulu. Akukhona ukuthi abantu babekwazi ukuqonda lezi zinto zisuka nje emva kokuzalwa, noma ukuthi babekwazi ukuziqonda emva kweminyaka embalwa yokukholwa ebuKristwini. Lokhu kungenxa yokuthi ngaphambili, uNkulunkulu uqobo Lwakhe wayengakakuchazi ngokugcwele lokhu, futhi Yena uqobo Lwakhe wayengakenzi msebenzi kulesi sici. Ngalokho, abantu abaningi babekholwa ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu kwakungelutho olungaphezu kwezinguquko ezimbalwa ekuziphatheni, ekucabangeni, kanye nasezenzweni zomuntu zangaphandle futhi kwakuze kube nabantu abathile ababekholwa ukuthi ukholo kuNkulunkulu lwalusho ukwehlelwa ubunzima obukhulu, ukungadli ukudla okuhle, nokungagqoki izingubo ezinhle. ENtshonalanga, ngokwesibonelo, kwakunendela lamaKatolika (ubuKatolika nabo buyinkolo; izindela, nakho kuwuhlobo lokholo) elalikholwa ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu kwakusho ukuchitha yonke impilo yalo lihlupheka ngokwengeziwe, lidla ukudla okuhle kancane, lingazivumeli ukuthokozela izinto ezinhle empilweni, nokunika imali kwabampofu nabadingayo ngenkathi linayo—noma okunye lenze izenzo ezilungileyo, ukuphana ngokwengeziwe kubantu, nokuba nosizo olwengeziwe kwabanye. Kuyo yonke impilo yalo alenzanga lutho ngaphandle kokuhlupheka, futhi alizivumelanga ukuba lidle ukudla okuhle noma ligqoke izingubo ezinhle. Lapho lifa, lalingagqoke lutho olubiza ngaphezu kwamadola amabili; izindleko zalo zokuphila zosuku zazifika kumadola ambalwa kuphela. Indaba yalo mhlawumbe yavela njengodaba olwejwayelekile noma olukhulu emhlabeni wonke. Futhi lokhu kukhombisani? Emehlweni esintu, ngumuntu onje kuphela ongumuntu olungileyo futhi onomusa, yilaba bantu kuphela umphakathi wenkolo okholwa ukuthi benza izinto ezinomusa nezenzo ezilungile, futhi yibo kuphela abaguqukile, futhi ngempela abanokholo kuNkulunkulu. Ngakho-ke kungenzeka ukuthi anehlukile: Akungabazeki ukuthi nikholwa ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu nokuba nokholo kumayelana nokuba umuntu olungile. Kumayelana nomuntu ongalwi nabanye, noma abethuke, umuntu ongenzi izinto ezimbi, umuntu obonakala sengathi ukholwa kuNkulunkulu; bakhona abathi ukuba umuntu oletha inkazimulo kuNkulunkulu. Lesi yisimo somqondo sawo wonke umuntu okholwa kuNkulunkulu, wonke umKristu, noma wonke umuntu owayekholwa esikhathini esedlule, noma wonke umuntu osanda kuqala ukukholwa kuNkulunkulu. Bakholwa ukuthi lokhu ukuguquka kwesimo, ukuthi yile ndlela kuphela abangaya ngayo ezulwini, nokuthi yile ndlela kuphela abangakwazi ngayo ukuba nesiphetho esihle. Ngakho, kungakhathaleki ukuthi leyo ndlela yokubuka igxile ngokujule kangakanani kuwe esikhathini esedlule, noma ithathe isimo noma cha, noma uke wacabanga ngalolu hlobo lodaba noma cha, kukho konke, kufanele ibe khona emqondweni wakho. Lokhu kungenxa yokuthi kukhona abantu abathile abafunde amazwi kaNkulunkulu amaningi kodwa abakwazi ukusho ngempela ukuthi ukuguquka kwesimo kuyini ngempela, ukukholwa kuNkulunkulu kwangempela kuyini, kuyini ukuba ngumuntu woqobo, Yena wamukela luphi uhlobo lomuntu, Yena uthanda luphi uhlobo lomuntu, futhi yiluphi uhlobo lomuntu afuna ukuluzuza. Uma ungaziqondi lezi zinto, kufakazela ukuthi lezo zinto ezisenhliziyweni yakho zisagxilile kuwe, zisakha futhi zisahola imicabango nokubuka kwakho.
Abanye abantu bathi: “Angikezwa ukuthi sengiguqukile. Lapho nje abantabami bengangilaleli, ngiyathukuthela. Lokhu akuyona yini imvelo yami esaziveza? Akukhona yini ukuthi selokhu akukho ukuguquka kwesimo? Lapho ngibona abangakholwa abangenalo ukholo kuNkulunkulu ngiyabenyanya, ngabe lokhu akukhona ukuntula ukuguquka kwesimo?” Nicabanga ukuthi lokhu kulungile? (Cha.) Yini engalungile ngakho? Kugxila ekuziphatheni kwangaphandle. Ungasho ukuthi ukuguquka kwesimo uNkulunkulu akhuluma ngakho kubhekise kulezi zinguquko zangaphandle emoyeni noma esimilweni? (Ukuguquka kwesimo kulapho ubudlelwano bethu noNkulunkulu buba obujwayelekile.) Ukholwa ukuthi manje, ubudlelwano bakho noNkulunkulu busondelene kakhulu, ukuthi ezintweni ezithile uyahambelana noNkulunkulu, nokho, ngezinye izikhathi uyathukuthela ngempela futhi ufune ukumemeza abantu, noma usenza izinto ezithile okholwa ukuthi azilungile. Ninakuphi ukuqonda ngalezi zinhlobo zezimo? Nizahlukanisa kanjani? Nizichaza kanjani? Niyazi ukuthi ukuguquka kwesimo kuhlanganisa ini? Niyazi ukuthi yiziphi izimo futhi yikuphi ukuziphatha okungokomuntu osebe nokuguquka kwesimo? (Asazi.) Anikuqondi lokhu, futhi anikaze nikucabange futhi? Ngakho-ke nikuqonda kanjani ukuguquka kwesimo? (Ukuguquka kwesimo ukuthi thina samukela ukwahlulela nokusola kwamazwi kaNkulunkulu futhi sibona izingqikithi zethu ezikhohlakele uNkulunkulu azidalulayo, futhi siba nokuguquka endleleni esibuka ngayo izinto. Khona-ke sesingaya ngokuya sizuza ukuhambisana noNkulunkulu—yilezi zinguquko. Ekuphileni kwansuku zonke, ukwenza isibonelo, uma ingane iziphatha kabi, asikwazi ukuhlala sikubekezelela nje; kunezinto ezidinga ukuqondiswa. Okungukuthi, ukuguquka kwesimo akusikho ukungaqondisi noma ukungathethisi ingane. Lokhu akubonakali kuhlangene nohlobo lokuguquka kwesimo esikhuluma ngakho. Lokhu ukuqonda kwami.) Lokhu ngukuqonda okumsulwa kakhulu. Okokuqala, ngizonibuza umbuzo. Qhubekani nicabange ngawo. Uma isimo sakho siguqukile futhi uneqiniso, khona-ke ukubuka kwakho kuzohambisana noNkulunkulu. Lapho ukubuka kwakho kuhambisana noNkulunkulu uzobe usahambisana nabantu abakhohlakele? Ngeke, akunjalo? Uyophambana nabantu abakhohlakele futhi uyobazonda; bayokunyanyisa futhi bakucasule. Yebo? Lokho akukhona okuyokwenza? Uyokwazi ukubuka izingqikithi zabo ngokucacile ngoba usuvele usubone eyakho ingqikithi ngokucacile. Uma uguqukile, ngeke futhi ukwazi ukubuka izingqikithi zabantu abakhohlakele ngokucacile? Uma ukwazi ukubuka izingqikithi zabo ngokucacile futhi uhambisana noNkulunkulu, ngeke ucasulwe ngabantu abakhohlakele? Ngeke ucasulwe ngabantu abangakholwa kuNkulunkulu, abayizitha zikaNkulunkulu, abalahla uNkulunkulu, abamkhaphelayo nabangamlaleli? Ngakho usengalokhu uhambisana kanjani nabo? Ngakho, uma isimo sakho siguqukile, nakanjani uzocasulwa futhi unyanyiswe yibo. Kodwa ngenxa yokuthi manje sisaphila phakathi kwabantu abakhohlakele, konke esingakwenza ukukubekezelela bese sisebenzisa ukuhlakanipha ezimpilweni zethu. Asikwazi ukubaziba nje noma sivele siphikisane nabo sicabanga ukuthi thina uqobo sesikuzwile ukuguquka kwesimo sethu. Asikwazi ukwenza lokho. Kufanele sibe nokuhlakanipha—lokhu kulungile. Kukhona olunye udaba eningacacelwa kakhulu ngalo. Nixhumanisa ukuguquka kwesimo kanye nokuhambisana noNkulunkulu nokungathukutheleli abangakholwa. Lokhu akulungile. Ngikusho ngani lokhu? UNkulunkulu ufisa ukusindisa umuntu, ukhulume amazwi amaningi, futhi wenze umsebenzi omningi—ngakho ufisa ukuthi abantu babe njani? Ufisa ukuba imicabango yabo iqondiswe yiqiniso, nokuba baphile izimpilo zabo ngeziqubulo zeqiniso. Akakuceli ukuba ube ngongenamqondo njengonodoli, ingasaphathwa eyokuba nomoya owodwa njengomfino, ungenamizwelo ejwayelekile. Kunalokho, ufisa ukuthi ube ngumuntu ojwayelekile othanda lokho Yena akuthandayo, futhi ozonda lokho Yena akuzondayo, ongathokozela lokho akuthokozelayo, futhi enyanye bese elahla lokho Yena akwenyanyayo. Ningakwamukela lokhu? Ngakho, manje kufanele ucacelwe—yini uNkulunkulu afuna siyiguqule lapho siguqula isimo sethu?
UNkulunkulu ukhulume izinto eziningi ukuze asindise isintu, ukuguqula wonke umuntu ngamunye. Uke ucabange ukuthi umuntu unjani uma eke wapheleliswa nguNkulunkulu? Ngizwe abafowethu nodadewethu abaningi bethi: “Sengikholwe kuNkulunkulu isikhathi eside kakhulu. Ngisavinjwe yizinto ezithile ezingaphandle.” Abanye odadewethu bathi: “Lapho ngibona abangakholwa begqoke okuthile nami ngiye ngifune ukukugqoka, lapho ngibona umuntu ethola imali ngiba nomona bese nami ngifuna ukuthola imali, futhi lapho ngibona umuntu egqoke kahle ngifuna ukumbuka.” Abanye abafowethu bathi: “Lapho ngibona umndeni womuntu unemali, futhi ucebile, nami ngifuna ukuphuma ngiyothola imali, lapho ngibona owesifazane omuhle ngifuna ukumbuka, futhi lapho kukhona okungahambi ngendlela engifuna kuhambe ngayo ngifuna ukuthukuthela. Angikabi nakho ukuguquka kwesimo kulezi zindlela. Lapho ngihlangana nenkinga ethile imicabango yami isahlubuka. Ngingazilawula kanjani lezi zinto? Ziyoguquka nini lezi zinto?” Kungenxa yalokhu ukuba ngithi anikwazi okuqondwe ngokuguquka kwesimo. Nibeka nje imikhawulo kinina ekuziphatheni kwenu, ezenzweni zenu zangaphandle, nasemoyeni kanye nasezimilweni zenu. Ngeke kwenzeke ukuba nithole izinguquko esimweni senu ngale ndlela. Kukuphi emazwini kaNkulunkulu lapho kuthi khona kufanele nibeke imikhawulo phezu kwenu, ukuthi kufanele nibheke amazwi enu, nibambe imizwa yenu, futhi nibheke ulaka lwenu, nokuthi kufanele niqaphele ukuveza imvelo yenu, futhi kufanele nizincishe ezingutsheni enizithengayo nenizigqokayo? Uke wawasho amazwi anjalo? Ngisho lapho kunokubhekiswa ezintweni ezinjalo, aziwona umongo wamazwi Akhe, noma amaqiniso amakhulu aletha ukuguquka kwesimo sabantu. Iningi lamazwi kaNkulunkulu likhuluma ngengqikithi yomuntu ekhohlakele, ngendlela yokwazi ingqikithi yomuntu ekhohlakele, indlela umuntu ongathola ngayo ukuguquka kwesimo sakhe, indlela angazi ngayo ngempela ingqikithi yakhe ekhohlakele, nokuthi angakhululeka kanjani esimweni sakhe esikhohlakele ukuze enze ngokuhambisana nezimfuneko zikaNkulunkulu bese eba ngumuntu ofuna inhliziyo kaNkulunkulu uqobo, futhi owenelisa isifiso sikaNkulunkulu. Uma nikuqonda lokhu, ingabe nisayozixaka ngezindaba ezikha phezulu kanjalo? Ngalokho, uma ungayiqondi incazelo yokuguquka kwesimo, awusoze wayiqonda ingqikithi yokuguquka kwesimo, futhi awusoze wakuthola ukuguquka kwesimo sakho. Ikakhulu, abanye abomphakathi wenkolo abasanda kwamukela lesi sigaba somsebenzi basazoguquka ngokuphelele besuka emikhosini yenkolo kanye nokucabanga nemibono yezenkolo esimweni sezingqondo nokubuka kwabo ukukholwa kuNkulunkulu; basazama ukuba abangokomoya, babe mnene, nobubele, ukuba ngumuntu ohlonipheke ngokwemvelo, othanda ukwenza okuhle futhi aphe abanye. Lokhu akulungile neze! Uma ufuna ukuba ngumuntu onjalo, awusoze wanconywa nguNkulunkulu, futhi awusoze waba nokuguquka kwesimo; uma ufuna ukuba yilolo hlobo lomuntu, awuwuqondi umoya. Ngabe abantu abafuna lezi zinto bayakwazi ukuqonda ingqikithi yeqiniso? Abakwazi, angithi? Ngakho, labo abafuna ukuba nokuguquka kwesimo kufanele baqale baqonde ukuthi lokho kuyini, futhi baqonde ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu kwangempela kuyini.
Ukuguquka kwesimo akubhekiseli ezinguqukweni zemikhosi noma imithetho, futhi ikakhulu akubhekiseli ezinguqukweni kulokho okugqokayo, izenzo zakho zangaphandle, isimilo sakho, noma inhliziyo yakho. Akukhona ukuguqula ukwephuza ukucasuka kuye ekucasukeni ngokushesha noma okuphambana nalokho, noma ukuguqula umuntu ozothile aye koyiqepheqephe, noma umuntu othanda ukukhuluma abe ngothulayo. Akunjalo—kuqhele kakhulu lokho, kwehluke kakhulu kokufunwa uNkulunkulu. Lapho abantu beqala befuna ukukholwa kuNkulunkulu bonke basebenzela kulezi zinto. Lapho beqala nje ukusebenzela kuzo, babambezela imisebenzi yabo ebalulekile. Abazi ukuthi ukufuna iqiniso kuyini, ngakho, njengomphumela walokho, emva kweminyaka emibili noma emithathu yalolu hlobo lokufuna, emva kwamajika amaningi, bacabanga ngalokhu: “Ukusho kukaNkulunkulu lezi zinto akuqondile ukwenza abantu baguqule ukuziphatha kwabo kwangaphandle. Sihlala sinake lokhu, futhi ngokuhamba kwesikhathi, sithola ukuthi akukho lapho singaya khona. Sizwa ukuthi ukukholwa kwethu kuNkulunkulu kufanele kube sekugcineni, ukuthi akukho okusele ukuthi sikwenze, akukho okungenziwa.” Lapho befunda amazwi kaNkulunkulu futhi bebona okuningi kakhulu okwamazwi Akhe abangakangeni kukho, masinyane baba nokubona bese beqala ukwazi: Kuhlaluka ukuthi lapho uNkulunkulu eguqula izimo zabo, uqala abenze bazazi, bazi ingqikithi yabo ekhohlakele bese ekhipha impande yayo, asebenze kuyo, bese ethola umsuka wayo. Niyakubona lokhu manje? Niyakuqaphela lokhu? Nikholwe yonke le minyaka kodwa anikabi nakho ukuguquka kwesimo—iyini impande yalokho? Ukungazi ukuthi ukuguquka kwesimo kuyini. Angithi? Abanye abantu ngeke bavumelane nalokhu, kodwa bazothi: “Ngiyazi ukuthi kuyini ukuguquka kwesimo, kodwa angikwazi ukuzibamba. Ngihlala ngenza noma yini engifuna ukuyenza; ngihlala ngenza engicabanga ukuthi kulungile.” Akukhathaleki ukuthi ukusho kanjani, kukho konke, uma usho okufana nalokhu kufakazela ukuthi awukaqondi ukuthi ukuguquka kwesimo kuyini. Manje usuyaqonda? Yini ningasho lutho? Ngabe isimo senhliziyo sisinda kakhulu? Uma sikhuluma ngokuguquka kwesimo ngokwenziwe, nizizwa ngokwengeziwe ukuthi nikude ngokwedlulele, futhi nizizwe ngokwengeziwe ukuthi anikaze nibe nakho ukuguquka. Uma sikhuluma ngokwengeziwe ngokuguquka kwesimo bese sembula imvelo nengqikithi yabantu, nizwa ngokwengeziwe ukuthi anikaze nibe nakho nhlobo, futhi kufanele niqhubeke nisebenze kanzima, akunjalo? Nginibuzelani lokhu? Empeleni, ngiyazi ukuthi kukhona izinto eningakwazi ukuziphendula. Abanye abantu bazothi: “Awenzi nje izinto zibe nzima kithi? Uma wazi ukuthi kunezinto esingenampendulo kuzo, ubuzelani?” Akukhona ukwenza izinto zibe nzima kinina. Ngethemba ukuthi nizokuthathela phezulu konke enginibuza khona. Akufanele nithathe konke okushiwoyo, isihloko sakho konke ukuhlanganyela njengengxoxo nje ejwayelekile, nilalele kalula nje bese nehlukana nakho. Konke esikhuluma ngakho, yonke ingxenye yalokhu okuqukethwe iyinto okufanele kuhlanganwe nayo endleleni yethu yesikhathi esizayo yokukholwa kuNkulunkulu. Akukho nokukodwa okungashiywa. Kuyantuleka futhi emicabangweni nasemibonweni yawo wonke umuntu. Inhloso Yami ekunibuzeni yithemba lokuthi niyocabanga ukuthi lezi zinto zisezinhliziyweni zenu noma cha. Uma ningakaze nicabange ngalezi zinto ngaphambili, nginicela ukuba nisifake enhliziyweni lesi sihloko futhi nizindle ngaso. Uma kuyinto enike nacabanga ngayo ngaphambili noma uma nike naba nalolu hlobo lokubuka noma umcabango, ngicela ukuba nikubheke, nicabange ngokubanzi ukuthi ninazo lezi zinto noma cha. Akudingekile lokhu? (Yebo.)
Imihlangano yethu yamanje ayifani nohlelo lwebandla olwejwayelekile ngesikhathi esithile nasendaweni ethile, futhi uyakulalela nje lapho kufika isikhathi bese kuyedlula. Kulula kanjalo? Izihloko esizixoxayo manje yizihloko eziphambili kakhulu phakathi kwabantu—zibaluleke kakhulu kunoma yisiphi esinye isihloko. Niyavumelana nalokhu? Lokhu kungenxa yokuthi izihloko zethu zamanje zimayelana nesiphetho sesintu sesikhathi esizayo kanye nezimfuneko uNkulunkulu, uMbusi wazo zonke izinto, anazo kithi. Sihlola lezi zihloko futhi siba nokuhlanganyela ngazo nsuku zonke. Lokhu sibe nokuhlanganyela ngazo, kodwa kuze kube manje abantu abanye abaziqondi kahle, ukuhlanganyela kwethu akuphelile, futhi kuze kube manje asikakwazi ukuziqeda ngokuphelele noma sixoxe ngokugcwele ngesihloko esisodwa. Ngakho, izindaba zokuphila azilula njengoba abantu becabanga—ukuthi balalela izintshumayelo eziningi, babhale amanothi ambalwa, bafunde amazwi kaNkulunkulu amaningi, bese befunda ngekhanda iziqephu ezimbalwa ezaziwa kakhulu, futhi lapho sekuyisikhathi sokuhlangana ndawonye basebenzise lezi zinto ukuhlanganyela nabanye, bese kuphela. Kufanele unake. Kufanele sicacelwe ngaso sonke isihloko, futhi sonke isihloko siyiqiniso okufanele umuntu ngamunye ahlome ngalo. Uma ubona lokhu njengokubaluleke kakhulu, enhliziyweni yakho awuzithandi lezi zinto futhi awunandaba nazo, khona-ke awusoze ukwazi ukuzithola noma ukuzemukela enhliziyweni yakho. UNkulunkulu ukhanyisela labo abalangazelelayo; uNkulunkulu uyazifihla kulabo abangafuni iqiniso. Uma unenhhliziyo yokulangazela neyokufuna, uyokukhanyisela, asebenze enhliziyweni yakho futhi akwenze uqonde futhi ucacelwe—ucacelwe ngayo yonke ingxenye yeqiniso kancane kancane. Ningathi isihloko sokuguquka kwesimo sibalulekile? (Yebo.) Sibaluleke ngempela, ngoba manje nidinga ngokuphuthumayo ukuqonda le ngxenye yeqiniso. Niyesaba ukuthi ngeke niguquke, nokuthi niyolahlwa lapho inhlekelele yehla, nokuthi niyohlupheka enhlekeleleni, angithi? Ngempela kunabantu abesaba ukuthi abaqondi iqiniso elanele manje, futhi kamuva lapho uNkulunkulu evivinya abantu, ngeke bakwazi ukuma baqine kodwa bayokhubeka; khona-ke bayophela, ngoba lesi yisigaba sikaNkulunkulu sokugcina sokusindisa umuntu, futhi uma umuntu engasindisiwe kulesi sigaba uyophela. Umnyango uyovalwa ekukholweni kwabo kuNkulunkulu, isiphetho siyomenyezelwa. Akunjalo?
Ukuze sithole ukuguquka kwesimo kufanele siqale siqonde ukuthi kuyini. Sisanda kukhuluma ngokuguquka kwezimo ezithile ezisemiqondweni yabantu. Nani ninqekuzise amakhanda, nonke nivumile ukuthi lezi zinto zilungile, nokuthi lezo akuzona izinguquko zangempela esimweni esifunwa nguNkulunkulu. Khona-ke yiluphi uhlobo loguquko lwangempela uNkulunkulu alufunayo? Okokuqala, umbandela wokuqala wokuguquka kwesimo ulapha ngezansi. Sidinga ukwazi ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, nokwazi ukuqonda amazwi Akhe. Uma singenakho lokhu, asikwazi ukuthola ukuguquka kwesimo ngoba ukuze sithole lokho kufanele siqhathanise ubuthakathaka bethu, ukukhohlakala kwethu, noma imvelo yethu yokumelana noNkulunkulu namazwi Akhe, futhi-ke kufanele sisiphule izinto ngaphakathi kithi ezimelene noNkulunkulu, ezimnyanyisayo, izinto ezingukukhaphela uNkulunkulu. Ngitsheleni, ngale kwamazwi kaNkulunkulu, yiziphi ezinye izincwadi noma yiluphi olunye uhlobo lwezinto olungaguqula izimo zabantu? (Akukho.) Ngakho, uma nisusa amazwi Akhe, ukuguquka kwesimo senu nakanjani ngeke kukwazi ukwenzeka. Abanye abantu bathi: “Angifuni ukufunda amazwi kaNkulunkulu, ngoba maningi kakhulu futhi angazi ukuthi ngiqale kuphi. Ngakho ngabe ukuguquka kwesimo akuyona into engenzeke kimi?” Awuthandi ukufunda amazwi kaNkulunkulu—akusho lutho lokhu—asinawo amaculo amazwi kaNkulunkulu? Cula lawo maculo ngokwengeziwe—kulawo maculo kunezimvunge, futhi awakhathazi futhi uzokwazi ukukhumbula amazwi kaNkulunkulu kalula ngokwengeziwe. Ungaqala ukuvusa ukuthanda kwakho ngala mazwi. Uyabona ukuthi kudumaza kanjani ukusho lokho? Ukuthanda kwabantu ukudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu kufanele kuvuswe; bakude kakhulu kokufunwa nguNkulunkulu. Abantu ngempela abalithandi iqiniso. Amazwi kaNkulunkulu amangalisa kakhulu, futhi kusuka ekuqaleni kuya ekugcineni onke ahlomulisa esintwini, kodwa abantu abawathandi. Abantu ngempela bakude kakhulu kulokho okufunwa nguNkulunkulu! Okokuqala, njalo lapho udla futhi uphuza amazwi kaNkulunkulu kufanele uthandaze. Uthi: “O Nkulunkulu, ngiwomele ngempela amazwi Akho futhi ngifisa ukuguquka kwesimo ngoba ngesaba ukuwela enhlekeleleni, futhi ngifuna ukuba nesiphetho esihle. Ngethemba futhi ukuba ngumuntu wangempela, ukuba umuntu omthandayo, kodwa maningi kakhulu amazwi Akho futhi angizimisele ngokuphelele ukuwadla nokuwaphuza. Ngicela ukuba ungiqondise futhi ungisize ukuze amazwi Akho abe nendawo enhliziyweni yami. Ngicela ukuba ungikhanyisele, ungenze ngikwazi ukuqonda iqiniso elengeziwe emazwini Akho, ukubuka ukubaluleka kwamazwi Akho, ukubuka ukuthi amazwi awukuphila kwami nento okufanele ngiyizuze.” Uma uthandaza ngalobo buqotho, ngokushesha uNkulunkulu uzosebenza kuwe, akwenze uqonde amazwi Akhe ngokwengeziwe kusuka ezingeni elikha phezulu kuya kwelijulile. Abanye abantu bathi: “Ngempela ngithanda ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu futhi sengike ngalifunda kanye kusuka ekuqaleni kuya ekugcineni, kodwa angazi ukuthi yikuphi okubalulekile ukukudla nokukuphuza, yiziphi izinto ezisemqoka ukuzidla nokuziphuza; angazi ukuthi kutholakala kanjani ukuguquka kwesimo noma yimaphi amaqiniso engingaziqhathanisa nawo.” Ingaxazululwa kanjani le nkinga? Ngabe ibandla manje alikhiphi ncwajana yokucashuniwe kwamazwi kaNkulunkulu mayelana nokuthi uNkulunkulu wahlulela, asole, futhi embule kanjani ingqikithi yesintu ekhohlakele? Ngakho ungabeka eceleni ukulandisa okude kwamazwi kaNkulunkulu bese ufunda iziqephu ezicashuniwe kuqala. Zama ukuqonda iqiniso elembulwe ngamazwi kaNkulunkulu ngala mazwi—umkhawulo uyoba mncane ngale ndlela. Okokuqala kufanele ufake amandla emazwini kaNkulunkulu. Kukhona izihloko esingakwazi ukuzixoxa ngokugcwele, futhi singazixoxa kuphela kufike ezingeni esingakwazi ngalo. Uma singakwazi ngempela ukuxoxa ngokugcwele ngazo, singaqala sizibeke eceleni, bese sikhetha esisodwa sokuhlanganyela okulula kithi ukusiqonda futhi esiseduze kwezinga lolwazi lwethu, siphinde sisuke kokungaphandle bese sijula. Ngeke kwenzeke ukuthi ngokushesha usuke ezingeni elijulile uye kwelijule kakhudlwana ekungeneni kwakho. Lokhu kungenxa yokuthi ukuphila komuntu kufana nomzimba wakhe—uya ngokuya ukhula njengoba bekhula, futhi uya ngokuya wanda.
Abanye abantu bathi: “Ngiyokulinganisa kanjani ngempela ukuthi sengibe nakho ukuguquka esimweni emva kokudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu? Lo mbuzo uyinto abafowethu nodadewethu abaningi abakhathazekile ngayo. Lapho ingane izalwa bese unina eyincelisa, nicabanga ukuthi ikhathazekile ngokuthi izokhula nini? Ikhathazekile ngokuthi iyakhula noma cha? Kudingekile lokhu? Akudingekile. Abanye abantu bayabuza: “Khona-ke kufanele ngazi kanjani ukuthi ngiguqukile noma cha, noma ngiguquke kangakanani?” Lokhu akuyona into odinga ukukhathazeka ngayo ngoba uzoguquka nje ngokwemvelo lapho sekuyisikhathi sokuba uguquke, noma lapho usuguqukile uyokuzwa nje. Uyokwazi ukuzwa ukuthi usuguquke kangakanani. Kuso sonke isigaba nakuso sonke isimo uNkulunkulu uyokwenza izinto ezithile noma akuvumele uhlangane nezimo ezithile noma akumisele abantu, izigameko noma izinto ukuze ufunde izifundo ezithile. Uma uzicabanga kusuka ekuqaleni kuya ekugcineni, uyokwazi ukwenza ukuqhathanisa ukuthi yiziphi izinhlobo zokubuka owawunazo ekuqaleni nokuthi yiziphi izinhlobo zokubuka onazo manje. Lapho uqeda nje ukwenza lokho kuqhathanisa, uyokwazi ukuthi uguqukile ngempela noma cha. Njengamanje okubaluleke kakhulu kuwe ukudla nokuphuza ngokwengeziwe, ukuhlanganyela ngokwengeziwe, ukulalela ukuhlanganyela ngokwengeziwe, nokufaka amandla emazwini kaNkulunkulu. Lokhu kulunge ngokuphelele, futhi kungumbandela omkhulu wokuthola ukuguquka kwesimo. Uma usuka kulokhu bese ugxila ukuzwa kanjani ukunyakaziswa uMoya oNgcwele, ukuthi ukwazi kanjani ukuphila emoyeni nokuba nomoya, ungamsebenzela kanjani uNkulunkulu kahle, ungayivimba kanjani inhliziyo ekwedukeni bese ngokuthula nangenhliziyo ephelele uhlale phambi kukaNkulunkulu, noma ukuthi ungathandaza kanjani kaningi, khona-ke akusizi ukugxila kulezi zinto—zonke azibalulekile kakhulu. Yini-ke ebaluleke kakhulu? Ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu. Ngaphandle kokudla nokuphuza amazwi Akhe, kuyoba njengomuntu egqoka bese ehlanza indlu nsuku zonke kodwa angadli. Uma ehlanza indlu kahle kakhulu bese egqoka kahle kodwa angadli, angaphila? Ngakho, ukushiya izwi likaNkulunkulu kuyafana nje nokungadli lutho kanye nokugqokela nje ukubonakala. Noma ubuhlanza kahle kanjani ubuso bakho, ngisho ususa isikhumba esidala, ngeke kusize—akulona iqiniso lokhu? Uma ufaka amandla emazwini kaNkulunkulu, isivuno sakho siyolingana namandla owafakile. Awudingi ukuphenya noma ukulinganisa ukuthi sikhulu kangakanani isivuno, futhi phezu kwalokho, awudingi ukuzikhathaza ngaso. UNkulunkulu uyokwenza, futhi uyokunika umvuzo. Uyokunika ukukhanyiselwa futhi uyokwenza wazi. Akufanele ukhathazeke ngakho futhi ukuphenye, futhi akusona isibopho sakho. Uyakuqonda lokhu manje? Ngakho, uma abantu abathile bebuza kamuva: “UNkulunkulu uyongivivinya nini? Ngiyokwazi ukukumela? Empeleni usewuhlolile umsebenzi wami? Sesiguquke kangakanani ngempela isimo sami? Kungani uNkulunkulu engakhulumi?” Lokhu kuyinto engenamqondo nengathi shu ongayisho. Awudingi ukukhathazeka ngalezi zinto—ngelinye ilanga lapho usunaleso siqu esingokomoya, lapho isimo sakho sesiguquke ngempela, lapho unganqoba khona isimo ohlangana naso ngokufanele futhi ungakwazi ukubhekana naso ngokuhambisana nezimfuneko zikaNkulunkulu, khona-ke uyokwazi ukuthi uguqukile. Lokhu kuguquka akukhona okwangaphandle, kodwa kuphuma ngaphakathi. Kuwukuguquka kwesimo, engqikithini.
Empeleni uguquko esimweni aluyona into eyenzeka ngesikhathi esifushane. Abanye abantu baqala ngokuguqula ubuthakathaka babo futhi behluleke kaningi. Emva kokwehluleka noma ukukhubeka, bayazicosha futhi, bese kuthi emva kwesikhathi sokuba nombono ophambene bacabange: “Kuphelile, angiyinto yalutho. Ukuguquka kwesimo akuhlangene nami—angikwazi ukuguquka. Ukuguqula lobu buthakathaka obuncanyana, lo mkhuba omncane omubi nengikukhonzile okuncane, kulukhuni kakhulu, ngakho ngeke yini ukuguquka kwesimo kube lukhuni ngokwengenziwe?” Baba nombono ophambene futhi bezwe ukuthi abanalo ithemba futhi isikhathi eside abazimiseli ukudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu. Bazizwa becasuka uma umuntu ekhuluma ngokholo kuNkulunkulu, abazimiseli ukuhamba uma becelwa ukuba benze umsebenzi wabo, futhi abanandaba nhlobo nokukholwa kuNkulunkulu. Yisimo esinjani lesi? Uke wahlangana nokunje? Uyakwesaba ukwehluleka? Ngabe uyesaba ukuthi, lapho ngempela ufuna ukuguquka kwesimo, uhlala wehluleka, uhlala unombono ophambene, uhlala ukhubeka, uhlala ubuthakathaka? Kungakhathaleki ukuthi uyesaba noma cha, ukuguquka kwesimo akwenzeki ngesikhathi esifushane—lokhu kuyiqiniso. Lokho kungenxa yokuthi ukuguquka kwesimo kuwuhlobo lokuguquka okutholakala ngokuvumbulula umsuka wengqikithi yomuntu ekhohlakele, njengoba nje umuntu enomdlavuza futhi kunesimila esesikhulile, udinga ukukhwela etafuleni lokuhlinzela kusikwe isimila. Kufanele ezwe ubuhlungu obukhulu, futhi kuyinqubo eyinkimbinkimbi. Ngesikahthi sale nqubo, mhlawumbe uyoqonda into eyodwa kuphela emva kokwedlula kokuningi, futhi kungemva kwalokho kuphela lapho uyothola khona ingxenye eyodwa yokuguquka esimweni. Noma mhlawumbe emva kokuhlangana nabantu, izigameko, izinto, nezimo ezehlukene eziningi, emva kokuthatha izindlela eziningi ezimajikajika ungathola ukuguquka okuncanyana. Noma ngabe inguquko inkulu kangakanani, iyigugu kakhulu emehlweni kaNkulunkulu. Uyayazisa futhi ayikhumbule ngenxa yokuthi uhlupheke kakhulu futhi wakhokha inani eliphezulu. UNkulunkulu ubona ekujuleni kwezinhliziyo zesintu futhi uyazi ukuthi yiziphi izifiso zakho. Uyazi futhi yibuphi ubuthakathaka bakho, futhi ngaphezu kwalokho uyakwazi okudingayo. Ngakho, ngaphambi kokuguquka kwesimo, kufanele sibe nokuzimisela okukodwa: Kungakhathaleki ukuthi isimo sinzima kangakanani noma ukuthi yiziphi izinhlobo zobunzima esihlangana nazo, kungakhathaleki ukuthi sibuthakathaka kangakanani, sinombono ophambene kangakanani, asikwazi ukulahlekelwa ukwethembela ekuguqukeni kwesimo, futhi asikwazi ukulahlekelwa ukwethembela emazwini kaNkulunkulu. UNkulunkulu unikeze isintu izethembiso, futhi abantu kufanele babe nokuzimisela nokubekezela ukuze bazenze. UNkulunkulu akawathandi amagwala; uthanda abantu abanokuzimisela. Noma ngabe uveze ukukhohlakala okuningi, noma ngabe uthathe izindlela eziningi ezimazombezombe, noma ngabe endleleni ube nokona okuningi futhi noma umelane noNkulunkulu—noma kukhona abantu ezinhliziyweni zabo abanokuhlambalaza uNkulunkulu okuthile noma abamgxekayo, abanokuphikisana Naye—uNkulunkulu akakubheki lokhu. UNkulunkulu ubheka kuphela ukuthi umuntu uyokwazi yini ukuguquka ngelinye ilanga. EBhayibhelini, kukhona indaba yokubuya kwendodana yolahleko. Kungani kwaba khona lolu hlobo lomzekeliso? Wukuthi intando kaNkulunkulu yokusindisa isintu iqotho. Unika abantu amathuba okuphenduka kanye namathuba okuguquka, futhi kulesi sikhathi, uyabaqonda abantu futhi ubazi ngokujulile ubuthakathaka babo nezinga lokukhohlakala kwabo. Uyazi ukuthi bazokhubeka. Njengalapho umuntu eyingane encane futhi efunda ukuhamba, noma ngabe unomzimba omuhle kangakanani noma ulukhuni kangakanani, kuzoba khona izikhathi lapho ezowa futhi akhubeke, izikhathi lapho ezingqubuza khona entweni noma aqhuzuke. UNkulunkulu uqonda wonke umuntu njengoba umama eqonda ingane yakhe. Uqonda bonke ubunzima bomuntu, ubuthakathaka, kanye nezidingo zakhe. Ngaphezu kwalokho, uqonda ubunzima umuntu ngamunye ozohlangana nabo ekuqhubekeni, inqubo yokungena ekuguqukeni kwesimo, nokuthi yiziphi izinhlobo zobuthakathaka nokwehluleka okuzokwenzeka. Lokhu yinto uNkulunkulu ayiqonda kakhulu. Kungakho kuthiwa uNkulunkulu ubona ekujuleni kwezinhliziyo zabantu. Noma ngabe ubuthakathaka kangakanani, kuphela uma ungamshiyi uNkulunkulu noma le ndlela, uyohlala unethuba lokuthola ukuguquka kwesimo. Futhi uma sinethuba lokuthola ukuguquka kwesimo khona-ke sinethemba lokuqhubeka kokuphila kwethu. Uma sinethemba lokuqhubeka kokuphila kwethu, sinethemba lokusindiswa uNkulunkulu. Ngakho, lapho sazi ukuthi ukuguquka kwesimo kuyini, lapho sazi ukuthi iyiphi indlela okufanele siyihambe ukuze kube nokuguquka kwesimo, asidingi ukwesaba. Kodwa, kufanele sibe nokwethemba, futhi sidinga ukuthandaza phambi kukaNkulunkulu, sithi: “O Nkulunkulu, mina, umuntu okhohlakele, ngikhohlakele ngokujule ngendlela yokuthi angazi ukuthi iqiniso liyini, futhi ngazi ngisho nakancane ukuthi ukuguquka kwesimo kuyini. Ngiyidinga ngempela insindiso Yakho kanye nosizo nelungiselelo Lakho ukungivumela ukuba ngazi indlela yokuqonda amazwi Akho bese ngiwenza, ukuba nolwazi nokuhlangenwe nakho kwamazwi Akho kanye nokuwafaka empilweni yami, ukuba nokuqondisa Kwakho kulo lonke izwi nesenzo, konke ukunyakaza, yonke inhloso nakho konke engikwenzayo empilweni yami. Ngethemba ukuthi kungaba yile ndlela futhi ngiyakulangazelela. Ngilangazelela ukuphila ubuntu obejwayelekile nokuphila ngokufana nomuntu wangempela ukuze nganelise Wena, kodwa angikwazi ukukufeza manje—nginokukhohlakala okuningi kakhulu futhi kwamina angikwazi ukukubuka. Ngicela ungembule, bese ungisiza futhi unginike ukondleka. Yilokhu engikudinga manje.” Kufanele ube nalolu hlobo lomthandazo kanye nalolu hlobo lokuzimisela. Emva kokuthandaza kanje, ngaphandle kokukubona, inhliziyo yakho nempilo yakho iyoba nokuguquka. Lokhu kungoba uNkulunkulu uyogcwalisa imithandazo yethu noma ngayiphi indlela esithandaza ngayo, futhi uyoletha noma yikuphi esizimisele ngakho. Uma uhlala wesaba, ngeke kulunge. Siqala ukwesaba singakahlangani nalutho ngempela—lokhu kufakazela ukuthi asinakho ukuzimisela noma ukwethemba ukuguquka kwethu esimweni. Okokuqala kufanele siqonde ukuthi ukuguquka kwesimo akuyona into esheshayo. Imvelo yesintu ikhohlakaliswe kakhulu nguSathane—ingabe kwenzeka ngokushesha? Isintu sesikhohlakaliswe nguSathane iminyaka eyizinkulungwane eziningi, futhi imvelo yaso isidalulwe ngokugcwele. Sekufike eqophelweni lapho bengakwazi khona ukukulawula nokuthi ukuvezwa kwakho ngokwemvelo lapho kuqhathaniswa noSathane sekufike ezingeni eliphezulu kakhulu, izinga lokuba yisitha kuNkulunkulu, eqophelweni lokuthi benyanyiswa yinoma yini eyiqiniso, okungamazwi kaNkulunkulu, okuvela kuNkulunkulu, abakunyanyayo futhi abanandaba nalezi zinto. Bandikindiki kuze kufike kuleli zinga, ngakho ukuguquka kwesimo kungashesha kangaka? Akuyona into elula kangaka. Ngakho kufanele sibe nokuqonda okufanele ngezinguquko zesimo. Kufanele sibe nesimo somqondo esifanele ngalokhu—asikwazi ukungabi nokungokoqobo, asikwazi ukulindela ukuguquka ngokushesha bese sithi: “Ngikholwa kuNkulunkulu futhi uma ngisadla futhi ngiphuza amazwi amaningi Akhe, ngeke ngiguquke? Uma uNkulunkulu enza umsebenzi omncane owengeziwe noma enza izimangaliso ezithile, ngeke ngiguquke?” Kulolu daba lokuguquka kwesimo siyabona ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ungowempela futhi ungokoqobo, nokuthi unamandla okusindisa isintu engqikithini yokukhohlakala kukaSathane, ukubasusa ezandleni zikaSathane, futhi unamandla nokuhlakanipha ukubavumela ukuba bathole ukuguquka kwesimo. Mayelana nohlelo lokuphatha lukaNkulunkulu, ungasho ukuthi uhlelo lwakhe olokusindisa abantu ukuze anqobe uSathane, noma ngabe uhlelo Lwakhe olokulwa noSathane ukuze asindise isintu? (Olokulwa noSathane ukuze asindise isintu.) Ngakho kufanele sibe nokuqonda okushaya emhlolweni ngohlelo lokuphatha kukaNkulunkulu. Ngakho esikhathini esizayo akufanele sithi: “Isizathu sokuthi uNkulunkulu angambhubhisi uSathane ukuthi ngaphandle kukaSathane sasingeke sisindiswe nguNkulunkulu, futhi kwakungeke kube nohlelo lokuphatha lukaNkulunkulu lokusindisa iqembu labantu nokubenza bahlale bekhona ekugcineni.” UNkulunkulu ulwa noSathane kuphela ukuze asindise isintu nokuthi athole iqembu labantu. Akuyona inhloso yokulwa noSathane, futhi uthola abantu abathile ngokwenzeka nje. Siyibonile intando kaNkulunkulu nomongo wenhloso yohlelo Lwakhe lokuphatha. Ufuna ukuthola iqembu elithile labantu, iqembu labantu bangempela. Yilolu uhlelo Lwakhe lokuphatha. Kucacile ukuthi njengomuntu okholwa kuNkulunkulu, ukuguqula isimo nokuba ngumuntu othandwa nguNkulunkulu nomuntu ojwayelekile njengokufisa kukaNkulunkulu kubaluleke kakhulu.
Ninayo indlela yokuthola ukuguquka kwesimo? Ninakho ukuqonda ngokudinga ukuguqulwa? Nike naba nokuhlanganyela ngale ngxenye yeqiniso? Siqeda kusho nje ukuthi ukuguquka kwesimo akubhekisile ekuguquleni ukuziphatha noma ukwenza kwangaphandle, noma ukuguqula imithetho, nokuthi ukuguquka kwesimo akukhona ukuguquka kobuntu, ngakho-ke kuyini? Nike nacabanga ngalokho? Okokuqala kufanele sicacise, kufanele siqonde ukuthi yiziphi izimo nezinto uNkulunkulu afuna ukuba siziguqule. Akafuni izinguquko zamasiko noma ezisekelwe olwazini, noma izinguquko zemicabango ethile evulekile. Kunalokho, uNkulunkulu ufuna ukuguqula yonke imibono yomqondonkolelo ngamazwi Akhe—lokhu kuyingxenye eyodwa yakho. Enye ingxenye yizimiso ngemuva kwendlela oziphatha ngayo, okungukuthi, indlela yokubuka kwakho impilo. Futhi kunemvelo yobusathane obukhohlakele ejulile abantu abayembulayo. Ngokukhuluma okwejwayelekile, ukuguquka esimweni kunalezi zingxenye ezintathu.
Imibono yabantu yomqondonkolelo yimibono yabo kulo lonke uhlobo lwento—uNkulunkulu ufuna ukukuguqula lokhu. Abanye bathi, “Kungani uNkulunkulu efuna ukuguqula lokhu? Kubaluleke ngani ukuguqula lokhu?” Ake sibheke isibonelo esilula sengxenye yemibono yomqondonkolelo. Sinakuphi ukuqonda ngolwazi? Iyini imiqondo yethu ngolwazi? (Sikholwa ukuthi uma sinolwazi, sonke siyoba nesikhundla, amathemba ekusasa, nodumo.) Ngakho, wazisa futhi ukhonze ulwazi kakhulu. Okokuqala, ngabe wonke umuntu akakholwa ukuthi ulwazi luyinto ebalulekile ezimpilweni zabantu kulo mhlaba? Abantu bakholwa ukuthi lapho benolwazi ngokwengeziwe, bayoba nesikhundla esikhulu emhlabeni, futhi bayoba nokuphucuzeka, izinga eliphakeme, nokucwengeka okwengeziwe. Ngakho, umuntu akakwazi ukungabi nolwazi. Futhi abanye abantu bakholwa ukuthi uma unemfundo enhle futhi ucebile ngokolwazi, konke kuyoza kuwe. Isikhundla, umcebo, umsebenzi omuhle, nekusasa elihle. Ngakho akulungile ukuntula ulwazi. Kulo mhlaba, uma ungazi futhi unemfundo ephansi, abantu bonke bazokubukela phansi. Akekho ozofuna ukuzihlanganisa nawe, futhi uyokwazi kuphela ukuphila ezingeni lomphakathi eliphansi, ubhekane futhi uthintane nalabo abasemazingeni aphansi abangenalwazi noma isikhundla. Uma unalolu hlobo lokubuka, uluthanda futhi ulukhonze ngempela ulwazi. Ubukela ulwazi phezulu kakhulu, njengento ebaluleke kakhulu—ngisho nangaphezu kweqiniso. Kunabantu abanye abathi: “Uma ngingafundile, ngiyokwazi yini ukuqonda amazwi kaNkulunkulu? Akakhulumi uNkulunkulu ngolwazi, ngemibhalo?” Lezi yizinto ezimbili ezehlukene. Uhlobo lolwazi engibhekisele kulo manje yilokho abantu abakukholwayo: umlando, ulwazi lokwakheka komhlaba, ibhizinisi, umbusazwe, imibhalo, isayensi nobuchwepheshe bamanje, ingxenye ethile yamakhono, nezingxenye zokucwaninga. Abantu bakholwa ukuthi lezi zinto ziwuhlobo oluthile lwabaqine kukho, nokuthi ngolwazi, bazothola indawo yokuzimelela kulo mhlaba, futhi bazoba nakho konke. Babeka ukubaluleka okukhulu olwazini. Akukhathaleki ukuthi ukubuka kanjani, le yingxenye yemibono yakho yomqondonkolelo. Endulo, abantu babenesisho esithi: “Funda izincwadi eziyinkulungwane, hamba amamayela ayizinkulungwane.” Kuchaza ukuthini lokhu? Ukuthi lapho ufunda izincwadi ngokwengeziwe, izinto zizokuhambela kahle ngokwengeziwe, uzoqonda ngokwengeziwe, futhi uzoba nesikhundla esikhulu ngokwengeziwe konke lapho uhamba khona. Lolu hlobo lombono womqondonkolelo ukhona emqondweni wawo wonke umuntu. Ngakho, wonke umuntu owaphila ekhaya elimpofu ngeminyaka yakhe yesikole, owayengafundile kakhulu futhi ongakwazanga ukuthola iziqu zemfundo ephakeme uphatheka kabi ngempela ngalokhu. Uma izimo zekhaya lakhe zingcono uyaqinisekisa ukuthi izizukulwane ezizayo—izingane nabazukulu—zithola imfundo, ziya ekolishi, zithola iziqu, futhi mhlawumbe ziye phesheya ziyoqhuba izifundo eziphezulu. Mayelana nolwazi, lokhu kuwukulangazelela, indlela yokukubuka, imicabango, nezindlela zawo wonke umuntu. Angithi? Ngakho, abazali abaningi benza konke abangakwenza futhi bangakhathazeki ngenani elikhokhwayo, noma baze baphelelwe yimali, ukuze bakhulise izingane zabo futhi bazinike imfundo. Abazivumeli izingane zabo ukuba zithole imfundo encane. Futhi abazali baziqondisa kuze kube kuliphi izinga izingane zabo? Bazivumela kuphela ukuba zilale amahora amathathu njalo ebusuku. Abazivumeli ukuthi zilale kuze kube yihora lokuqala ekuseni, bese bezivusa ngehora lesine ekuseni. Baziphoqa ukuba zifunde, bethi: “Uma ufuna ukuqhubekela phambili, kufanele ufunde ngokwengeziwe. Kufanele usebenze kanzima.” Futhi abanye babuye benze izingane zabo zilingise ukwenza kwabasendulo ngokubophela izinwele zazo emshayweni phezu kwamakhanda azo ukuze zingakwazi ukulala. Zihlala zifunda nje. Kusuka endulo kuze kube sosukwini lwanamuhla, lezi zinhlobo zezindaba, lezi zinhlobo zezinto ezimbi, bezenzeka, futhi bezenzeka kuwo wonke umuntu. Lezo yizenzo nokuziphatha kwawo wonke umuntu onokulangazelela ulwazi, ogcwele umqondo wakhe wolwazi. Akunjalo?
Ningase nicasulwe kakhulu yilokhu engikushilo, ngoba abanye benu bazi kakhulu noma banezinga eliphezulu lemfundo. Ngempela angisho ukuthi ukuba nezinga eliphezulu lemfundo kubi. Kufanele lolu daba niluphathe ngendlela efanele; manje nidinga ukuphatha izinto zikaSathane ngendlela efanele, futhi nibe nokuqonda nombono ofanele ngazo. Angishongo ukuthi akufanele nithole imfundo, futhi ikakhulu angishongo ukuthi akufanele nikhulise izingane zenu ukuze ziye ekolishi, noma zithole iziqu, bese zithola umsebenzi omuhle. Angikushongo lokho, futhi anginithiyi—ngixoxa nje ngokubuka Kwami nezinga abantu abakhohlakele abakhonza ngayo ulwazi. Khona-ke abanye bathi: “Uma besingalutholanga ulwazi, besingakwazi ukukhuluma nawe manje?” Akunandaba ukuthi yini osuyifundile manje, ukuthi luphakeme kangakanani ulwazi lwakho, ukuthi iphakeme kanjani imiqondo nemicabango onayo ekhanda lakho, zingaki izincwadi ozifundile, mingaki iminyaka yasekolishi oyiqedile, noma ziphakeme kangakanani iziqu onazo. Noma kunjani-ke, lezi zihloko engabelana nani ngazo ekuhlanganyeleni azihlobene nazo zonke lezi zinto. Ngikhuluma iqiniso nje—engikhuluma ngakho ukubuka kwabantu ulwazi. Uyazi ukuthi uNkulunkulu ulubona kanjani ulwazi? (UNkulunkulu ufuna abantu babe nolwazi oluningi lwesayensi.) UNkulunkulu ufuna abantu babe nolwazi oluphezulu lwesayensi, ufuna abantu baqonde izinto eziningi; uNkulunkulu ufuna ukuba abantu benze kahle. Lokhu kulungile. Akafuni ukuthi abantu bangaqondi lutho, bangazi lutho, kodwa usebenzisa lezi zinto ukwenza umsebenzi. Akazincomi lezi zinto futhi nakanjani akazisebenzisi lezi zinto ukuthi zithathe indawo yeqiniso, futhi akazisebenzisi ukwengeza ebuntwini babantu noma ukuguqula izimo zabantu. Lapha nalaphaya, imibono ngezingxenye ezihlobene nolwazi iyathintwa emazwini kaNkulunkulu. Ngempela mhlawumbe anicacelwa kakhulu ngalokhu. Ngisho ukuthi, okunye kwalolu limi kusemazwini kaNkulunkulu. Ngokwesibonelo, ubuConfucian, umqondo wobuConfucian, noma isayensi yokuhlalisana kwabantu—okunye kwalokhu kukhulunywa ngakho ngendlela efanekisayo, futhi ekufundeni okungabekiwe obala emazwini Akhe kufanele sibone ukuthi uNkulunkulu uyalwenyanya ulwazi lwesintu.Ulwazi lwabantu aluyiyo nje imisho nezibalo ezilula. Kunemibono ethile yemiqondonkolelo equkethwe phakathi kulolo lwazi—kunobuthi obuthile ngaphakathi kwalo, futhi lonke uhlobo lolwazi lunohlobo lwalo lobuthi. Okuqukethwe yilolo nalolo hlobo lolwazi kunohlobo lwakho lomdlavuza. Lapho abantu befunda futhi bebamba le midlavuza, ingena emiqondweni yabo bese bekhohlakaliswa futhi bathunjwe yilezi zingxenye zolwazi. Ngakho lapho abantu bezuza ulwazi ngokwengeziwe futhi lapho bebamba okwengeziwe, kuba lukhuni ngokwengeziwe kubo ukukholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi kuba lula ngokwengeziwe ukukuphika. Lokhu kungoba ulwazi lungokuphathekayo. Lukufundisa ukucwaninga nokubamba izinto ezingabonakala nezingathinteka emhlabeni. Luyalwa noNkulunkulu. Uma ufunda izincwadi ezithile zomlando, imisebenzi edumile, imilando yabantu abakhulu, noma uma ufunda ingxenye ethile yesayensi nobuchwepheshe, amakhono athile, uyozuzani? Ake uthi ufunda isayensi yezinto zemvelo futhi uqonda izimiso ezithile zesayensi yezinto zemvelo, ezobuNewtonian noma enye imfundiso, futhi emva kokufunda lokhu, ukugxilisa enhliziyweni futhi ulawulwe yikho. Lezi zinto zizoyaluza ngaphakathi kuwe, zizoqondisa imicabango yakho, bese lapho ufunda amazwi kaNkulunkulu ucabanga: “Kungani izwi likaNkulunkulu lingakhulumi ngamandla omhlaba okudonsa? Yini lingakhulumi ngomkhathi? Ukhona umoya enyangeni? Yini lingasho ukuthi umhlaba unomoya-mpilo ongakanani? Kungani uNkulunkulu engakhulumanga ngalezi zinto? UNkulunkulu kufanele azembule lezi zinto. Kunesidingo sokuthi zembulwe, kufanele zembulwe. Kufanele atshele isintu ngazo.” Ngeke kube ukulwa ngaphakathi kuwe? Uyobeka iqiniso likaNkulunkulu ngemuva, bese ubeka ulwazi lwakho endaweni ephambili lapho kuya emazwini kaNkulunkulu. Noma kunjani, lezi zinhlobo zolwazi zinganika abantu imizwa engalungile futhi zibenze baziqhelise kuNkulunkulu. Noma niyakukholwa noma cha, noma ningakwamukela namuhla noma cha, ngelinye ilanga niyowamukela la maqiniso. Ulwazi lungaholela abantu encithakalweni yabo futhi lungabaholela esihogweni. Manje niyakuqonda lokhu, angithi? Abanye abantu kungenzeka bangazimiseli ukwamukela la mazwi ngoba abanye benu bazi kakhulu, bafundile, baneziqu eziphakeme, noma bakholwa ukuthi baneziqu eziphakeme. Anginibhuqi noma ngihlekisa ngani. Lokhu kuyiqiniso. Angisho ukuthi ngethemba ukuthi nizokwamukela ngokushesha lokhu, ukuthi nje ngifuna ukuba niye ngokuya niba nokukuqonda okuthile lokhu. Ulwazi luyinto engaba wudonga phakathi kwakho nokwazi kwakho uNkulunkulu nokuhlangana kwakho nomsebenzi kaNkulunkulu. Lungenza kube lukhuni kuwe ukusondela kuNkulunkulu, lukwenze uqhele kuNkulunkulu, futhi lukwenze usebenzise umqondo wolwazi lwakho ukuhlaziya nokuphatha yonke into uNkulunkulu ayenzayo. Kodwa ngenxa yokuthi usuvele unolwazi oluthile, yini ongayenza? Kufanele ubone futhi uhlaziye izinto esisekelweni solwazi nendlela eziphazamisa futhi zone ubudlelwano obejwayelekile noNkulunkulu, futhi zone ukungena kwakho okufanele ekukholweni kwakho kuNkulunkulu. Kufanele ukubone lokhu—lokho kulungile, futhi kufanele ube nokuqonda okulungile ngalesi sihloko. Ngeke ube nokuqonda okungalungile, angithi? Ngiyazi ukuthi kukhona abafowethu nodadewthu abathile abaneziqu eziphakeme, futhi lokhu akukhona ukunihlasela, noma ukuhlekisa ngani noma ukunibandlulula. Ngenxa yokuthi siqale kungalindelwe ukuxoxa ngalesi sihloko namuhla, bengifuna ukuqala ngikhulume ngengxenye yaso eyodwa esifanekisayo ukuze nginidonsele kuso. Akukhona ukwenza ngenhloso ukuba izinto zibe lukhuni kulabo benu abaneziqu eziphakeme noma abanemfundo ethile, ukunenza nibe nombono ophambene noma nidangale. Bekungekhona okwaleyo nhloso. Niyakuqonda kahle lokho? (Yebo.) Kuyowukhulula-ke umqondo Wami bese ngiphefumula ngokukhululeka.
Siqeda kukhuluma ngokuningi, futhi manje nibonile ukuthi ukuguquka kwesimo akulona udaba olulula. Kufanele uthole imibono yakho yomqondonkolelo bese ubona ukuthi yimiphi kuyo elwa noNkulunkulu, eyizinto azizondayo, izinto angazithandi, bese uhlaziya imvelo yobusathane ngaphakathi kuwe. Kungakhathaleki ukuthi ufunde kangakanani, kungakhathaleki ukuthi uyinhloboni yomuntu, imvelo yakho yobusathane igxile kakhulu ngaphakathi kuwe—wonke umuntu ngamunye uyafana. Konke lokhu ngakunye kulwa noNkulunkulu, futhi impande, ingqikithi, okuqukethwe yinto ngayinye akuhambisani nhlobo nengqikithi yobuntu noma iqiniso. Uyakuvuma lokhu, angithi? Khona manje, ngiqale ukukhuluma ngendlela yokuqonda ulwazi olusemibonweni yemiqondonkolelo yabantu, futhi angishongo lutho oluqondiswe kunoma yimuphi umuntu; ngihlola lolu daba nje nawo wonke umuntu futhi ngixoxa ngalo. Abanye benu bazizwa bengakhululekile; luthinte indawo ebuhlungu kinina futhi nizizwa ngingakhululekile futhi ningathokomele. Ngethemba ukuthi kancane kancane ningemukela lonke iqiniso elivela kuNkulunkulu nakho konke uNkulunkulu akushoyo wena ongazimisele ukukwamukela—zama ukukwamukela lokhu. Ngale ndlela, singaya ngokuya sisondela enhliziyweni kaNkulunkulu nakulokho akufunayo. Uma singaziboni futhi singaziqondi lezi zinto ngokwempela nangokoqobo, ukholo lwethu kuNkulunkulu luyoba yisiqubulo nje futhi ngeke lube necala elinengqikithi. Akulungile lokho? Namuhla sixoxe izindaba ezinengqikithi, futhi lokho akuhambisananga kahle nani. Ngiyaxolisa uma nizizwe ngingakhululekile. Kufanele sihlale sibhekana nala maqiniso—awukwazi ukuwagwema. Uma uwagwema, uyokwazi nini ukwazi ukuthi izinto ezikhona emibonweni yakho yomqondonkolelo zilungile noma azilungile? Ngeke ukwazi. Kuyoba khona usuku lapho kumele ubhekane khona nala maqiniso. Njengoba nje abangakholwa bethi, “Umakoti omubi ngelinye ilanga kuyofuneka ukuba abhekane nabasemzini.” Uma ungabukeki kahle, luyoba khona usuku lapho uyohamba uyohlangana nabasemzini, futhi ngeke uthi, “Angibukeki kahle ngakho ngeke neze ngiyobabona.” Lokhu akukwazi ukwenzeka, ngaphandle kokuthi ungamshadi lowo muntu. Ngoba manje ukholwa kuNkulunkulu futhi ufuna ukwamukela ukusola nokwahlulela kukaNkulunkulu, futhi ufuna ukuthola uguquko, ukungena, nokusindiswa, kuzofuneka ubhekane nala maqiniso. Kungaba ukuthi ekubhekaneni nalokhu kokuqala uyozwa ungaphathekile kahle izinsuku ezintathu noma ezine futhi lapho uthandaza phambi kukaNkulunkulu ngeke ube nalutho olufanele ozolusho, ngeke uyazi indlela yokukhuluma Naye. Esikhathini esilandelayo uhlangana nalokhu uyophatheka kabi ezinye izinsuku ezintathu noma ezine futhi ngeke uyazi indlela yokukhuluma Naye. Bese kuthi ngokulandelayo, ngaphandle kokukubona, uyothola emaqinisweni ukuthi lezi zinto ngempela zikhona ngaphakathi kwemibono yakho yomqondonkolelo, ngaphakathi enhliziyweni yakho. Uyovumelana nawo futhi uwamukele amazwi kaNkulunkulu futhi uyokwazi ukuthi ngokwempela, ngokwethembeka nangobuqotho uvume ukuthi lokho uNkulunkulu akushoyo kuyiqiniso nelingakonakali. NguNkulunkulu ngempela oqonda kakhulu isintu nezinto ezikhona ngaphakathi kwenhliziyo yomuntu ngamunye. Ngolunye usuku, lapho ufinyelela kuleli qophelo ekwazini kwakho, uyobe usungene emzileni ofanele wokukholwa kuNkulunkulu nokuguquka kwesimo. Lokhu kungenxa yokuthi ngaleso sikhathi, uyobe ungekho ekuphambaneni noma ungakhululekile ngenxa yawo wonke umusho emazwini kaNkulunkulu, lonke iqiniso uNkulunkulu alembulayo ngeke likwenze ungakhululeki noma uzizwe ucasuka, futhi ngeke uligweme, kodwa uyobhekana nalo ngokufanele. Kuyobe sekufakazeleka-ke ukuthi usungenile emazwini kaNkulunkulu. Senze isiqalo esincane namuhla sase senza ukuhlola okuncane. Nizwa uhlobo oluthile lokungakhululeki noma ukungaphatheki kahle okuncane, kodwa akusho lutho. Anginandaba, futhi ngethemba ukuthi nawe awunandaba, ngoba amazwi kaNkulunkulu okwahlulela abantu anendluzula engaphezulu kwala mazwi. Uma uNkulunkulu ngempela efuna ukunahlulela nonke, amazwi Akhe ayoba nendluzula kunalokhu. Lapho ebona umuntu okhohlakele, ongenalutho, ongalaleli umcabango omuhle, uyoba nesimo somqondo esihle emazwini Akhe? Uyoba nesimo somqondo esihle lapho ekwembula? Nakanjani ngeke sibe sihle. Amazwi Akhe ayoba nendluzula futhi abe nzima kakhulu—uyohlaba esikhonkosini! Uma ukwazi ukwamukela amaqiniso esixoxe ngawo namuhla, lokho okuncanyana esikuxoxe namuhla, kukhombisa ukuthi wenze isiqalo esihle ekwamukeleni amazwi kaNkulunkulu nokwamukela ukusola nokwahlulela Kwakhe.
Isihloko sokuqala esixoxe ngaso kube yileso semibono yomqondonkolelo. Nginikeze isibonelo esincane—indlela enibuka ngayo ulwazi wonke umuntu alwaziyo. Asixoxanga kakhulu ngalokhu ngoba bengesaba ukuthi abantu abathile bebengakhululekile. Bengifuna ukunakekela imizwa yabanye abantu, ngakho sikhulume kuphela ngokuncane. Esikhulume ngakho bekungaphelele noma bekungagcwele, kodwa ngethemba ukuthi ningaya ngokuya nizama ukukuqonda ngenihlangana nakho empilweni. Sinake kancane nje le ngxenye, futhi ningaya ngokuya nihlangana nakho futhi nifune le ngxenye yeqiniso, futhi nizihlanganele nina nalokho ulwazi oluzonilethela khona. Futhi hleze esikhathini esizayo siyohlanganyela futhi ngalesi sihloko, futhi ngethemba ukuthi ngaleso sikhathi, ngeke nizizwe ningakhululekile noma nicabange: “Ngabe lokhu akukhona nje ukuthola iphutha kimi? Ngabe lokhu akubhekisiwe kimi?” Ake sisonge ukuhlanganyela kwethu ngalesi sihloko sokuqala.
Okulandelayo, asihlanganyele ngesihloko sesibili—ukubheka impilo. Kuyini ukubheka kwakho impilo? Siyini isimiso sakho sokuphila? Unakho ukukuqonda okuthile? Unaso isimiso? Unokuthile emqondweni? (Ukuqonda kwami kwamanje ngukufuna ukwazi uNkulunkulu.) (Ukugcwalisa umsebenzi wami njengomuntu odaliwe.) Kulungile, kuseduze neqiniso; kungokoqobo. Qhubekani. Anikwazi ukungabi nalutho emqondweni, kungenzeka? Ngabe nihlela ukuqhubeka nokukholwa kuNkulunkulu kanjalo bese kuphela kanjalo? Kufanele nazi enikuzwayo enhliziyweni yenu, angithi? (Okokuqala ukufuna ukuba umuntu othandwa nguNkulunkulu.) Lokhu kungenye indlela yokubuka. Ngisho ukuthi, luhlobo luni lomuntu ofuna ukuba yilo ngokujwayelekile, uyibheka kanjani impilo, iqonde kuphi impilo yakho? (Ukulandela uNkulunkulu yonke impilo yami esele, kuze kube sekugcineni.) Nakho lokhu kuhle kakhulu, kungokoqobo kakhulu. Awushongo ukuthi impilo yakho yonke, kodwa yonke impilo yakho esele. (Ukuguqula ukubheka impilo engiyamukele emhlabeni phambilini nokususa isimo sami esidala ngokushesha okungenzeka, nokuthola insindiso yangempela kuNkulunkulu.) Insindiso evela kuNkulunkulu—lena yimpokophelo yokulandelwa. Lokhu kuhle konke, futhi kukhombisa ukuthi ezinhliziyweni zethu, wonke umuntu kithina usebenza kanzima buthule. Senza izinqumo ngendlela yokulandela uNkulunkulu kuze kube sekugcineni nokuthi sibe luhlobo luni lomuntu. Sonke sinomgomo nalapho siqonde khona. Lokhu kusho ukuthi kuleli qophelo, ikhona ingqikithi ethile ezinhliziyweni zethu ngokukholwa kwethu kuNkulunkulu. Akuyona into engenalutho, asedlulisi nje izinsuku, nokuthola noma yini esingakwazi ukuyithola. Nonke niqhubekile ngalesi sikhathi—lena yinguquko. Okungenani anifani nalokho ebeniyikho ngenkathi ningabangakholwa futhi nithi, “Umuntu uphilela ukudla nokokugqoka kuphela.” Beningeke nikusho lokho, futhi ngabe ukuzwa lokho akunenzi nizwe ningakhululekile futhi nicasukile? Niyanengwa yilokhu futhi anikuvumi. Kungakhathaleki ukuthi ningene ngezinga elingakanani, phezu kwakho konke, lapho nizwa la mazwi niyacabanga, “Lokho akuyikho okufanele ngikulandele njengamanje futhi akukhona engikufunayo enhliziyweni yami. Inhloso yami yamanje ukuba ngumlandeli omuhle kaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu usevele wasembulela imfihlakalo Yakhe, intando Yakhe, nenhloso yohlelo Lwakhe lokuphatha kanye nokuzimisela Kwakhe ukusisindisa, uma siqhubeka nokungenzi lutho, siyomenzela phansi uNkulunkulu, empeleni siyomkweleta.” Ukuthi sinalokhu ezinhliziyweni zethu kukhombisa ukuthi umoya wethu usuvele uyavuka, ukuthi sesiqalile vele ukuguquka. Abanye abantu bathi: “Angikabi nayo indlela yokubheka.” Awunayo indlela yokubheka, mhlawumbe ngoba awukwazi ukuyiveza ngokucacile. Nokho, abanye abantu kungenzeka ukuthi bese benqumile ngokuyimfihlo: “Noma ngingasho lutho, nami nginayo indlela yokubheka futhi nami ngiyolandela uNkulunkulu kuze kube sekugcineni. Sengivele ngizimisele kodwa angisho lutho, ngakho akekho kini owaziyo. Lapho kufika isikhathi ngiyomangaza wonke umuntu.” Noma kwenzekani, kukho konke, ukubheka komuntu ngamunye kithina kumiswe kwabhekiswa ekusebenzeni ngamandla nokufuna umgomo wokusindiswa kwethu nguNkulunkulu. Kulungile lokho. Ingxenye ngayinye yalokhu kubheka inokwayo ukubaluleka okungokoqobo. Ngabe ukufuna ukuba ngumuntu okhonza uNkulunkulu ngobuqotho kuyindlela yokubheka okufanele sibe nayo? Ukungabe sisamelana noNkulunkulu, ukungabe sisamenyanyisa, singabe sisamenza asicasukele futhi abe lokhu esithukuthelele, ukududuza inhliziyo kaNkulunkulu, ukuba ngumuntu okhonza uNkulunkulu ngokwempela njengo-Abrahama—ngabe lokhu kuyindlela yokubheka impilo okufanele sibe nayo? Yebo, yikho. Ngalolu hlobo lokubheka impilo nalolu hlobo lokucabanga lugxilile emqondweni wakho, lapho ukufuna kwakho kuqonde ngapha, ngeke yini isilingo somcebo womhlaba, isikhundla nedumela kunciphe? Ngeke ukukhanga kunciphe? Lapho umsebenzi wakho onzima, ukwenza, kanye nohlangana nakho kuqonde kule ndlela yokubheka, ngaphandle kokuqaphela amazwi kaNkulunkulu azoba yisaga esiwumgomo ngaphakathi kwakho, isisekelo sokuphila kwakho, amazwi Akhe ayoba ukuphila kwakho, futhi ayoba yindlela yakho ekuphileni okungaphakathi kwakho. Ngaleso sikhathi, zonke izinto zalo mhlaba ngeke zisabaluleka kuwe, zingaba njalo? Ngakho, lokho okuyindlela yokubheka kwakho impilo kubaluleke kakhulu—ngabe ukufuna kwakho kuqondiswe kuphi ekukholweni kwakho kuNkulunkulu? Ngabe kuqonde endaweni elungile? Ngabe yindlela elungile? Kukude kangakanani nezimfuneko zikaNkulunkulu? Uma ukufuna kwakho kusekelwe phezu kwalokho uNkulunkulu afuna ukuthi ukufeze futhi uqonde endaweni elungile, khona-ke noma uphambuka kancane, noma ube buthakathaka ngandlela thize, akubucayi; uNkulunkulu ngeke anake, futhi uyokwesekela njalo. Yiluphi ohlobo lomuntu uNkulunkulu aluthandayo? UNkulunkulu uthanda umuntu ofuna iqiniso, onokuzimisela, futhi owethembekile, noma ngabe engazi lutho. UNkulunkulu akakwesabi ukungazi kwakho, ukuba buthakathaka, noma ukuntula ukuhlakanipha. Lokho akwenyanyayo yilapho ungenakho ukufuna, lapho ukubheka kwakho impilo kufana nje nokomuntu womhlaba futhi ukufuna kwakho kufana nokwesilwane—kungenamoya, kungenamgomo nokuqondwe kukho kokufunwa ekuphileni kwakho. UNkulunkulu uyalwenyanya lolu hlobo lwesimo somqondo ekukholweni kwakho Kuye. Ngakho, yiluphi uhlobo lokubheka impilo onalo olungolubalekile ekuguqukeni kwesimo? Abanye abantu bathi: “Indlela yokubheka kwami impilo ukuba umuntu osetshenziswa kakhulu nguNkulunkulu, ukuba ngumuntu okwazi ukusebenzela uNkulunkulu.” Ngabe lokhu kulungile noma cha? Lokhu kuhle futhi kulungile, kodwa isiqu somuntu esingokomoya sinomkhawulo, futhi bayehlukana ngamazinga nezimo. Nakuba ukufuna lo mgomo kulungile, akuswelekile ukuba kunifanele. Ngakho, ukubheka impilo umuntu okufanele abe nayo ngukufuna ukuba ngumuntu oneqiniso nobuntu, umuntu ononembeza nomqondo futhi okhonza uNkulunkulu—okungukuthi, ukuba ngumuntu wangempela—lokhu kuwukufuna okufanele kakhulu. Abanye abantu bathi: “Manje thina asithathwa njengabantu bangempela?” Uma ubuka ngaphandle, sonke singabantu. Sonke sinekhala namehlo—sinesakhiwo somuntu. Kodwa uma ubuka ngokusekelwe engqikithini yethu, asibona abantu bangempela. Ngakho sidinga ukufuna ukuba umuntu wangempela, ukuba umuntu oneqiniso okhonza uNkulunkulu. Lokhu kwanele. Mayelana nomuntu onezinga lokusetshenziswa nguNkulunkulu noma ukusebenzela uNkulunkulu futhi onezimo, lokhu kungolunye udaba. Lokhu kuwudaba lokwenza komuntu ngamunye.
Okulandelayo, asiqhubeke nokuhlanganyela kwethu engxenyeni yesithathu—imvelo yobusathane. Lena ngenye into efakwe ngaphakathi kokuguquka kwesimo esidinga ukuyiqonda. Ngenye yezingxenye eziphambili. Imvelo yobusathane yisimo sesintu sokukhohlakala, futhi iyingqikithi yesintu ekhohlakele. Lolu hlobo lwesihloko luthatha indawo eningi emazwini kaNkulunkulu. Emazwini Akhe lena yingxenye okwembulwe okuningi kakhulu ngayo, futhi amazwi Akhe ngalesi sihloko anendluzula kakhulu. Sikhulunywa ngezindlela ezihlukene—ezinye izindlela ziwukuveza nokwahlulela ngokuqondile, kuthi amanye amazwi ngalesi sihloko akhulunywa ngokungaqondile ngezindlela ezithile ngenxa yokwesaba ukuthi abantu bebengeke bakwazi ukuwemukela. Kodwa kungakhathaleki ukuthi ashiwo kanjani—ngayiphi indlela, ngaliphi iphimbo—kakade, akwembulayo uNkulunkulu yingqikithi yesintu. Lokhu kuyiqiniso elimsulwa. Mayelana nemvelo yobusathane, amazwi kaNkulunkulu axoxa ngengxenye evelele kakhulu yalokhu. UNkulunkulu usebenzisa iziqephu ezimbili ukukuveza. Niyazi ukuthi iyiphi ingqikithi evezwa emvelweni yobusathane? (Imvelo yokukhaphela.) Yebo! Le mvelo yokukhaphela yembulwa emazwini kaNkulunkulu “Inkinga Enzima Kakhulu: Ukukhaphela (1) nethi “Inkinga Enzima Kakhulu: Ukukhaphela (2).” Lokhu kungukuvezwa okuvelele kakhulu kwemvelo yobusathane. Kungani uNkulunkulu esho lokhu? Izingxenye ezisele ezinjengokuzazi ukulunga, ukuzithwala, ububi, ukumelana, noma inkohliso yomuntu—lokhu kuyashiwo ngandlela thize kuzo zonke iziqephu. Asikho isiqephu lapho iqiniso lanoma iyiphi kulezi zingxenye lingachazwa ngokuqondile. Yingqikithi yokukhaphela kuphela uNkulunkulu akhuluma ngayo kulezi ziqephu ezimbili. Uyabona kulokhu ukuthi ukukhaphela ukubheka kanjani uNkulunkulu nokuthi uyiphatha kanjani ingqikithi yesintu yokukhaphela. UNkulunkulu ngempela akathokozi ngokukhaphela kwabantu. Uyakuzonda lokhu kukhaphela, uyakwenyanya, futhi uyakwenyanya ukumkhaphela kwesintu. Lokhu kuyingxenye eveleleyo yemvelo yesintu—ukukhaphela.
Yini impande yemvelo yokukhaphela komuntu? USathane. Ngakho kuyadingeka ukuyiqonda le ngxenye yesimo sabantu. Impande yokukhaphela nguSathane nemvelo yakhe ngukukhaphela. UNkulunkulu ukholwa ukuthi lokhu umuntu akuvezayo ngezenzo zakhe eziningi ngukukhaphela. Kungani uNkulunkulu enika isikhala esikhulu kangaka ekukhulumeni ngalokhu? Ukukhaphela kwesintu kungawo wonke umzuzwana, wonke umzuzu; kwenzeka kungakhathaleki ukuthi isikhathi nendawo kuyini. Akukhathaleki ukuthi abantu benzani, okugxile ngokujulile emvelweni yabo kuyaphikisana noNkulunkulu. Abanye abantu bathi: “Angifuni ukuphikisana noNkulunkulu. Angifuni ukumelana noNkulunkulu.” Akukwazi ukwenzeka lokho. Unemvelo yokukhaphela ngaphakathi kuwe, futhi ngemvelo yokukhaphela awukwazi ukulalela uNkulunkulu, awukwazi ukumlandela kuze kube sekugcineni, awukwazi ukwamukela amazwi Akhe noma ukwamukela ngokuphelele amazwi Akhe njengempilo yakho. Ukukhaphela kusho ukuthi noma usukholwe isikhathi eside kangakanani kuNkulunkulu, usuwadle futhi wawaphuza isikhathi eside kangakanani amazwi Akhe, unokuqonda okungakanani ngoNkulunkulu, uma nje usenemvelo yokukhaphela uNkulunkulu, awukawemukeli amazwi kaNkulunkulu kuwe njengokuphila kwakho, futhi awukangeni eqinisweni lamazwi kaNkulunkulu, khona-ke ingqikithi yakho iyohlala iwukukhaphela uNkulunkulu. Ngamanye amazwi, uma ungabanga nakho ukuguquka kwesimo, ungumkhapheli kaNkulunkulu. Ngakho abanye abantu bathi: “Ngiyawaqonda amazwi kaNkulunkulu futhi ngiyacacelwa yilokho akushoyo. Ngizimisele futhi ukukwamukela, ngakho usasho kanjani ukuthi ngikhaphela uNkulunkulu?” Ukuzimisela ukwamukela akufani nokwazi ukuphila ngamazwi Akhe, futhi empeleni akufani nokuba ngosepheleliswe ngamazwi Akhe. Akunjalo? Iqiniso ngokwazi komuntu imvelo yakhe uqobo yokukhaphela lithe ukujula, futhi mhlawumbe nidinga isikhathi sokwazi ngaphambi kokuba niqonde le ngxenye yeqiniso. Emehlweni kaNkulunkulu, yonke into ngayinye eyenziwa yiwo wonke umuntu ngamunye okholwa Kuye inobutha Kuye. Lokhu mhlawumbe kuyinto nawe ongeke uyamukele. Ungase uthi: “Sisebenzela uNkulunkulu futhi sikhonza uNkulunkulu, senza umsebenzi wethu endlini Yakhe. Senze izinto eziningi—zonke zibe zinhle, futhi zenziwe ngokwentando Yakhe nokuhlelwa komsebenzi. Ungasho kanjani ukuthi lokhu kungukumelana noNkulunkulu nokumkhaphela? Kungani uhlala uchitha ukukhuthala kwethu? Bekulukhuni kithi ukushiya amakhaya ethu nokuyeka imisebenzi yethu bese sizimisela ukulandela uNkulunkulu. Kungani usho lokho kithi?” Inhloso ekukhulumeni lokhu ukuthi umuntu ngamunye abone ukuthi ukuba nokuziphatha kahle okuncane, noma ukudela izinto ezithile noma ukuhlupheka kancane akusho ukuthi imvelo yethu engaphakathi iguqukile. Akusho lokho! Kudingekile ukuhlupheka nokwenza umsebenzi wethu, kodwa akusho ukuthi imvelo ekhohlakele engaphakathi kithi ayisekho. Lokhu kungenxa yokuthi isimo sempilo ngaphakathi komuntu ngamunye kithi sikude nokwenelisa izimfuneko zikaNkulunkulu, futhi sikude nokufinyelela entandweni kaNkulunkulu. Akunjalo? (Yebo.) Kusho lokhu ukusebenzela uNkulunkulu ube futhi umelana noNkulunkulu. Kusho ukuthini ukumelana noNkulunkulu? Uma umelana noNkulunkulu, wenza into ngokuphambana noNkulunkulu, futhi ukuziphatha kwakho okuphambene noNkulunkulu kungukumkhaphela.
Kuphela lapha ukuhlanganyela kwethu ngesihloko sokukhaphela. Isihloko esilandelayo ukuvezwa okuvelele kwemvelo yobusathane—ukuzithwala kwesintu. Ukuzithwala kwesintu nakho kwembulwa futhi kuvezwe yonke indawo futhi akukwazi ukucashiswa noma ukunqotshwa. Imvama kuvele kuziveze nje, kugqamuke nje. Abantu abakwazi ukukulawula ngokwabo. Futhi emva kokuthi kugqamukile bayazisola, futhi emva kokuzisola bayazimisela ukuthi bangakuvumeli ukuba kugqamuke futhi noma kwembulwe futhi. Kodwa akukho okungenziwa ngakho—kungani lokho? Uma isimo somuntu singaguqukile futhi lezi zinto zisekhona ngaphakathi kwakhe, ngokwemvelo zizokwembulwa. Ngakho yikuphi lapho kungenzeka khona ukuba zingembulwa lezi zinto? Kulapho isimo sakho sesiguqukile kancane kancane. Ukucabanga kwakho sekube ngokufanele, usuqonde iqiniso ngokwengeziwe, usubambe okwengeziwe, ukubuka kwakho izinto sekuguqukile, kwajula futhi kwaba ngokungokoqobo ngokwengeziwe, futhi sekusondele ezimfunweni zikaNkulunkulu. Khona-ke ukuzithwala kwakho kuyoncipha ngandlela thize futhi ukukuveza kwakho mhlawumbe kuyozotha ngokwengezwe kancane. Kuyokwehluka kulokho okuyikho manje—okunokwedelela kakhulu, nokuzikhukhumeza okukhulu.
Okwedlule：Isahluko 55. Ungakuhlukanisi Lokho UNkukulunkulu Anakho Nayikho
Okulandelayo：Isahluko 65.Ungathola Iqiniso Ngemva Kokuyiguqulela Inhliziyo Yakho Yangempela KuNkulunkulu
Yilabo Abazi Umsebenzi KaNkulunkulu Namuhla Kuphela Abangasebenzela UNkulunkulu Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele X Mayelana Nenqubo Yokuthandaza